भिडियो – Ap Nepal
फुलन्देको आमा अर्थात उमेश राईको नयाँ म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
काठमाडौं / देउकृष्ण देवानको निर्देशनमा तयार पारिएको नयाँ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गायिका सुनिता थेगिम र चारखोले शिशिर लिङ्देमको स्वरमा रहेको ‘पानी कुवैको’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । जीवन बरालको शब्द तथा कृष्ण भक्त राईको एरेञ्ज रहेको गीतलाई गायकसमेत रहेको चारखोले शिशिर लिङ्देमले संगीतबद्ध गरेका हुन् । किङ्गस् स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको गीतलाई सुरेश राईले रेकर्ड तथा सानु कुमार पुनले मिक्सिङ÷मास्टरिङ गरेका हुन् । तीला भट्टराईले निर्माण गरेकी गीतको भिडियोलाई देउकृष्ण देवानले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोमा सयौं कोरस राखेर भिडियो बनाउन माहिर देउकृष्णको आफ्नै कन्सेप्ट रहेको छ । फिल्म ‘तारेभीर’फेम निर्माता देउकृष्ण पछिल्लो समय म्युजिक भिडियो निर्देशनमा निकै सक्रिय छन् । हालसम्म उनले दुई दर्जन बढी म्युजिक भिडियो निर्देशन गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय उनको निर्देशनमा तयार
May242022 by adminNo Comments
जन्म देखि नै शारीरिक अपांग भएर जन्मिएका यी युगल जोडीको सत्य कथा,भाग्यमा नलेखिएका र न`देखिएका कुराहरू,भाग्यले डोर्‍याउँदै लगेका पर छायाँहरू त्यीनै पर छायाँको फेर समात्दै जाने जिन्दगीका पर्छाप`हरू,कहिले उकाली त कहिले ओराली अनि लेक र बेसी भञ्ज्याङ चौतारीमा बिसाउँदै हिँड्ने अनवरत यात्राहरू,यात्रामा भेटिने`हरू,यात्रामा छुटिनेहरू,जीवनको खेल,जीवनको रंग अनि जीवनको खुसियाली र दुखहरू पनि अचम्म`को हुँदो रहेछ। अँध्यारोमा छामेपनी उज्या`लोमा देखेपनी रमाइलोमा अनुभव गरेपनी,जीवनका भोगाइ`हरू,जीवनका पीडाहरू,जीवनका उमंग`हरू,त्यही जीवनका अनुमानहरू सबै उस्ताउस्तै हुँदा रहेछन्। दुखसँगै जिन्दगीमा बाँच्नुपरेको छ,जसरी नि जिन्दगी`लाई साँच्नु परेको छ।जन्मदैँ एउटा एउटा खुट्टा नभएका एक युगल जोडी पूर्वका अर्जुन राई र पश्चिमकी नन्दी ओलीको प्रेम कथा साथै दुबैले भोगेको पीडा उस्तै रहेछ। हामी मानव हौं,संसा`रमा सर्वश
May212022 by adminNo Comments
दोषीलाई कार्वाही गर्न युवतीको पक्षमा मिस नेपाल साथै आमाहरु सडकमा निस्के हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
काठमाडौँ — आठ वर्षअघि एक किशोरीलाई बला त्कार गरेको आरोप लागेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालक मनोज पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई प्रहरीले शनिबार दिउँसो काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको स्रोतले जानकारी दियो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोलीले शनिबार बिहानैदेखि उनलाई निगरानीमा राखेको थियो । उनी मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक हुन् । उनले आठ वर्षअघि मिस ग्लोबल इन्टरनेसनलमा भाग लिएकी १६ वर्षीया किशोरीलाई बला त्कार गरेको आरोप छ । युवतीले आफूमाथि ब लात्कार भएको भन्दै टिकटक भिडिओमार्फत् घटनाबारे सार्वजनिक गरेकी थिइन् । यो घटनाबारे संसदमा पनि कुरा उठेको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रूलिङ गर्दै घटनाको छानविन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसै घटनाका दोसीलाई कार्वाही गर्न युवतीको पक्षमा मिस नेपालहरु सडकमा निस्केका छन्।
May202022 by adminNo Comments
राजु लामा सगरमाथा चढेर फर्कदा आमाको आँसु थामिएन, बुवा चाँहि खु:शिले छमछमी नाचे (भिडियो सहित)
काठमाडौँ– गायक राजु लामा सगरमाथा आरोहण गरेर काठमाडौं फर्किएका छन्। उनीसहित २७ जनाको आरोही टोली जेठ २ गते सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका थिए। सगरमाथाबाट फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलमा उनले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै आफूलाई नेपाली हुनुमा गर्व लागेको बताए। उनले भने, ‘सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्दा मलाई यति गर्व भयो कि हामी यस्तो सुन्दर देशमा छौं। नेपालमा सबैभन्दा ठूलो र राम्रो हिमाल छ। त्यो सगरमाथामा मैले पनि पाइला टेक्ने अवसर पाएँ ।’ गायक लामाले सोमबार बिहान सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेक्न सफल भएका हुन् । जलवायु परिवर्तनको असरबारे सन्देश दिन सर्वोच्च शिखर चढेका लामाले सगरमाथाको ६,५७४ मिटर उचाइमा एकल कन्सर्टसमेत गरेर कीर्तिमान बनाएका छन् । यो नै विश्वकै उच्च स्थानमा गरिएको कन्सर्ट हो । इम्याजिन नेपाल एक्सपिडिसनले बिहान ४ बजेदेखि ६ बजेर ४० मिनेटसम्ममा आफ्नो टिमका सबै जन
काडमाण्डौं मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्धवार”बालेन शाहलाई हाम्रो पार्टीमा स्वागत गर्न चाहन्छु” – मन्त्री झाँक्री (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
काठमाडौं, ६ जेठ / नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) की नेतृ तथा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्धवार बालेन शाहलाई आफ्नो पार्टीमा स्वागत गर्न तयार रहेको बताएकी छन् । उनले आफूले शाहलाई सफल भएको हेर्न चाहेको पनि बताई्न् । उनले भनिन्–‘म उहाँलाई सक्सेस भएको हेर्न चाहन्छु, उहाँको उमेरमा हामीले निर्वाचन लड्ने मौका पाएनौं, हामी पार्टीको अर्थोडोक्स सिस्टमभित्र बसेकोले विद्रोह गर्न सकेनौं । उहाँले गर्नुभयो । बालेन शाहजीलाई मेरो पार्टीमा वेलकम गर्न चाहन्छु । तपाईँ सक्सेस हुनुहोस ।’ झाँक्रीले अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आफूहरुकोलागि अपेक्षित नै रहेको बताएकी छिन् । उनले आफूहरुको लागि वि’द्रो’ह बाध्यता रहेको सुनाईन् । आफ्नो पार्टीले अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्राप्त गरेको परिणामबाट विचलन नभएको उनको भनाई छ । हिजो रात
हाम्रो यो बाध्यता हो “कोही त कस्तो राक्षस जस्ता कोतारेर कस्तो सम्म गर्छन के गर्ने “‘याै-नकर्मी’ सँगको सनसनीपुर्ण अन्तर्वाता, खुलाए सारा गोप्य कुरा (भिडियो सहित)
भिडियोका लागी अन्तिमा जानुहाेला । सुन्धारा जाने बाटोमा भएका दुई आकाशेपुलमा मानिसको भीड अत्यधिक थियो। त्रिपुरेश्वरपट्टिको पुलमा फुटपाथ पसलेहरू इयरफोन र मोबाइलका ग्लासजस्ता सामान फिँजाएर बसेका थिए। केहीले सलले मुख छोपेका थिए भने केहीले मास्क । एक युवतीले जिन्स पाइन्टमा क्रप टिसर्ट लगाएकी थिइन्। अर्की एक जनाले स्कर्ट र सेतो सर्ट लगाएकी थिइन्। पुलमा ओहोर–दोहोर गरिरहेका उनीहरू पुलमा अडेस लागेर बसेका पुरुषको नजिक जाँदै कुराकानी गरिरहेका थिए। एक जना पुरुषसँग उनीहरूले के कुरा गरिरहेका छन् भनेर चासो राखियो, ‘यिनीहरू को हुन् ? तपाईंलाई के भने?’ अकमकाएर उनले भने, ‘केही होइन। ‘जाने हो’ भनेर सोध्दै थिए।’ पुलको छेउमा आड लागेर बसिरहेका ती दुई युवतीसँग ग्राहक बनेर सोधियो– ‘कति हो नि रेट?’ ‘१५ सय,’ एउटीले भनिन्। ‘एक रातको? अनि कहाँ जाने? हाम्रोमा कि तपाईंकोमा?’ ‘एक रातको होइन, एक पटकको १५ सय
निकै नै मिठो स्वरले टिक-टकमा बोल्ने भाइका रमाइला टिक-टक भिडियोहरु निकै भाइरल (हेर्नुस् भिडियो सहित)
विगत केही वर्षअघि देखि निकै नै नेपालीहरुबिच सामाजिक संजाल टिकटक निकै नै लोकप्रिय छ । यहांं सबै मानिसहरुले आफ्नो प्रतिभा पस्कने गरेका छ । कति मानिसहरु यहाबाट निकै नै भाइरल बनेका छन । त्यस्तै कयौ म्युजिक भिडियोहरु पनि यहि टिकटकबाट नै भाइरल हुने गरेका छन । त्यस्तै अहिले पछिल्लो समयमा एकजना भाइ पनि टिकटमा उत्तिकै रुचाइएका छ्न ।उनी टिकटकमा निकै नै भाइरल छन । निकै नि मीठो र सबैलाई आदर सत्कार गरेर बोल्ने हुनाले उनलाई टिकटकमा अत्याधिक रुचाइएको छ । सबैलाई दादा-दिदी भनेर सम्बोधन गरेर बोलाउने रियान निकै नै लोकप्रिय छ्न । मोरङ बेलेबारी घर भएका रियानलाई भेट्न समय समयमा उनलाई मनपराउने शुभचिन्तकहरु आउने गर्छन । सानै उमेरमा बाबाले छाडेर गएका रियान ममीसंग मामलमा बस्छन । रियान र उनकी आँखा ममीको सामान्य मानिस भन्दा अलि फरक भएको हुनाले कति मानिसले आफुँहरुलाई अ’प’हेलना गरेको समेत उनी बताउँछन । उनीहरुक
बेहुला-बेहुलिको चकित पार्ने नाच भाइरल ,सबै हेरेको हेरै भए(हेर्नुस् भिडियो सहित )
छोरिले आफ्नो घर छोडेर परायाको घर जाने प्रचलन परापुर्व कालदेखिनै चलायमान प्रथा हो जसलाई बिवाह नामकरण गरियो र जुन तपाईं हाम्रो घर गाउमा चलिनेरहेको छ ।छोरी मान्छे भएपछि अरुको घर जानैपर्ने अवधारणा सहित यो अनन्तकालसम्म निरन्तर रहने र सो रहेमात्रै भाविपुस्ताहरुले आफ्नो ठाउँ पाउने कुरो सत्य हो । सामाजिक संजालमा हामिले चेलिले आफ्नो घर छोडेर सो घरलाई माइति बनाउदैगर्दा बिदाईको बेला धेरै चेलिहरु भावुक भएको नै पाउछौ ।किन मन नदुखोस् जुन घर आफ्नोे थियो अब त्यो माइति भयो ,मान्छे उहीँ छन् तर सम्बन्ध फरक भयो ।त्यस्तै कुनै बेहुलि भने बिदाईको बेला नाच्दै ,गाउदै ,रमाउदै गएको पनि हामीले सामाजिक संजालमै देखेका छौ। आजको यश शृङ्खलामा हामी तिनै नवबिवाहित जोडिले आफ्नो बिवाहमा नाचेको भिडियो सामाग्री पेश गर्दछौ ।बेहुला बेहुलि दुबैले दिल खोलेरै नाचे ,उनिहरुको यो नाचसगै सबै नेपालिको ध्यान उनिहरु तिरै खिचेको थियो
बालेन शाह राजावादी दलका समर्थक हुन् हिन्दु धर्मका प्रचारक हुन् बालेन साह : किशोर नेपाल (भिडियो सहित कुराकानी)
संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाण्डौं महानगरपालिकाको पछिल्लो नतिजा अनुसार मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साह एमाले उम्मेदवार केशव स्थापित भन्दा ५०५७ मतले अगाडि छन् । बालेनले ११ हजार १३ मत पाउँदा स्थापितले ५९५६ मत पाएका छन् । यसैगरी, सत्ता गठवन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार वनेकी नेपाली कांग्रसकी सिर्जना सिंहले ५२११ मत पाएकी छिन् । अहिले नै नतिजा यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहे पनि मतान्तरको अवस्था हेर्दा उनी मेयरमा निर्वाचित हुने सम्भावना पनि देखिएको छ। तर, कतिपयले भने अझै पनि बालेनको जितको लक्षण नदेखिएको वताउँने गरेका छन्। यदि बालेन काठमाण्डौंको मेयरमा निर्वाचित भएपनि उनीबाट आशा गर्न सकिने कुनै विषयवस्तु नभएको उनीहरु वताउँछन् । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले त नेपालका मिडिया, राप्रपा र पुर्वराजाका मान्छेले बोकेर बालेनलाई अगाडि ल्याएको आरोप लगाएका छन् । एउटा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने
कता हराए शिशिर भण्डारी ? अष्ट्रेलियामा ४० दिनदेखि यस्तो अवस्थामा रहेछन्- ल्याए यस्तो (भिडियो हेर्नुस)
चर्चित युटुब च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा दुई महिनादेखि कुनै पनि भिडियो प्रसरण भएको छैन । शिशिर भण्डारीको लोकप्रिय यस च्यानलमा किन भिडियो आएन ? यसका सन्चालक कलाकार तथा सँचारकर्मी शिशिर भण्डारी कहाँ हराए ? शिशिरलाई हिजो आज सामाजिक सन्जालमा यस्तै प्रश्नहरु आउने गर्दछन् । वास्तवमा शिशिर यतिबेला अष्ट्रेलियामा छन् । उनी एक साँगितिक कार्यक्रमका लागि मार्च १८ मा अष्ट्रेलियामा गएका थिए । त्यसपछि कार्यक्रमहरुको चाप बढेपछि बिगत ४५ दिनभन्दा बढि देखि उनी उतै छन् । शिशिर यहि मे १९ मा नेपाल फर्कदैछन् । यसैबिच अष्ट्रेलियाबाट शिशिरको एउटा फोटो बाहिरियो । जुन फोटोमा शिरि बाटोमा बसेर डलर माग्दै गरेको अवस्थामा देखिन्थे । उनलाई त्यो फोटो र भिडियोलाई लिएर पनि धेरैले प्रश्न गरे । वास्तवमा यो फोटो र भिडियोको वास्तविकता अर्कै थियो । शिशिर अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरुको समसामयिक कथामा आधारित सर्ट फि